Faahfaahin Dheeraada Weerarkii Gaadmoda Ahaa Ee Lagu Dhaawacey Ann-Margarethe Livh | Salaan Media
Faahfaahin Dheeraada Weerarkii Gaadmoda Ahaa Ee Lagu Dhaawacey Ann-Margarethe Livh
Aug 21, 2013 Mogadishu (SM) – Ann-Margarethe Livh waa haweeney u dhalatey dalka Sweden oo 64 sano jirta ahna hogaamiyaha xisbiga bidixda ee Stockholm. Haweeneydan ayaa lagu dhaawacey weerar gaadmo ah oo kooxo hubeysan ay ku qaadeen gaari ay la socotay xilli ay ka soo baxday jaamacada somalia.
Weerarkan oo ka dhacay aga gaarka KM4 ee degmada Hodan ayaa la tilmaamay in ay ku geeriyoodeen Turjubaankeeda iyo wadihii gaariga oo labaduba Soomaali ahaa. Ann-Margarethe Livh oo xiliga la dhaawacayay ka soo baxday Jaamacadda Somalia oo ay ka jeedineysey qudbad lagu furayey seminaar ku saabsan dowlad wanaaga oo ka furmay jaamacada soomaliya, waxaana haatan lagu daweynayaa isbitaalka Xalane oo xarun u ah ciidanka AMISOM.
Weerarada noocan oo kale ah ayaa laga cabsi qabaa in ay saameyn ku yeeshaan joogitaanka shaqaalaha u shaqeeya hay’adaha caalamiga ee wadanka gudihiisa ku sugan, mida kale waxaa xusid mudan in hal asbuuc kaliya ay ka soo wareegtey go’aankii dhakhaatiirta aan xudduuda lahayn ee MSF albaabbada u xidheen dhammaan mashaariicdii caafimaad ee ay ka wadday Soomaaliya.